Bit By Bit - Ny ho avy - 7.2.1 Ny mampifangaro ny Readymades sy Custommades
Tsy madio Readymade tetikady na ny madio tanteraka Custommade paik'ady mampiasa ny fahaiza-manao ny nomerika taona. Amin'ny hoavy tiantsika ny hamorona grefy.
Ao amin'ny teny fampidirana, dia nampifanohitra ny Readymade fomba Marcel Duchamp amin'ny Custommade fomba Michel-Ange. Io kosa koa dia hoe nambabo ny fahasamihafana eo amin'ny angon-drakitra mpahay siansa, izay mazàna miasa amin'ny Readymades, ary ny mpahay siansa ara-tsosialy, izay mirona hiasa amin'ny Custommades. Amin'ny ho avy, na izany aza, manantena aho fa ho hitantsika bebe kokoa grefy, satria tsirairay ireo fomba madio dia voafetra. Mpikaroka izay ihany no atao ny mampiasa Readymades handeha hiady, satria tsy misy tsara tarehy maro Readymades eto amin'izao tontolo izao. Noho izany, ny mpikaroka mifikitra amin'ny fomba madio io dia na handeha hamono zavatra hatao fanatitra kalitao amin'ny fampiasana ratsy tarehy Readymades, na izy ireo dia mandany fotoana be ny mitady ny tonga lafatra urinal. Mpikaroka izay ihany no atao ny mampiasa Custommades, amin'ny lafiny iray hafa, dia handeha hamono zavatra hatao fanatitra ambaratonga. Hybrid fomba, na izany aza, dia afaka hanambatra ny ambaratonga izay tonga miaraka Readymades ny mafy mendrika eo amin'ny fanontaniana sy ny tahirin-kevitra avy amin'ny Custommades.
Hitanay ohatra ireo grefy ao amin'ny tsirairay amin'ny empirical efatra toko. Tao amin'ny Toko faha 2, dia nahita ny fomba gripa Google Trends Mitambatra ho foana-on lehibe angona rafitra (fikarohana fanontaniana) miaraka amin'ny mety mifototra amin'ny rafitra nentim-paharazana fandrefesana (CDC gripa ny rafitra fanaraha-maso) mba hamokatra haingana vinavina (Ginsberg et al. 2009) . Tao amin'ny Toko faha 3, dia nahita ny fomba Ansolabehere Stephen sy Eitan Hersh (2012) mitambatra fanao-nanao fanadihadiana tahirin-kevitra tamin'ny governemanta vonona-nanao panjakana angon-drakitra mba hianatra bebe kokoa momba ny toetry ny olona izay tena hifidy. Tao amin'ny Toko faha 4, dia nahita ny fomba OPower fanandramana izay hanambatra ny vonona-nanao herinaratra fandrefesana foto-drafitrasa amin'ny fanao-nanao fitsaboana nianatra ny vokatry ny fenitra ara-tsosialy eo amin'ny fitondran-tena tao amin'ny ambaratonga goavana (Allcott 2015) . Farany, tao amin'ny Toko faha 5, efa nolazaiko anao momba ny fomba Kenneth Benoit sy ny mpiara-miasa aminy (2015) Nampihatra ny fomba amam-panao-nanao vahoaka-Coding dingana ho vonona-nanao napetraka ny fandaharan'asan'izy namorona ny antoko politika mba hamoronana tahirin-kevitra fa ny mpikaroka dia afaka ampiasaina mba hianatra fifidianana sy ny fihetsehana ny adihevitra politika.
Ireo rehetra efatra ohatra mampiseho fa mahery tetika amin'ny ho avy dia ny hanatsarana angon-drakitra lehibe loharanom-baovao, izay tsy voaangona ho an'ny fikarohana, miaraka amin'ny fanazavana fanampiny izay mahatonga azy ireo ho tsara kokoa noho ny fikarohana (Groves 2011) . Na dia manomboka amin'ny Custommade na ny Readymade, io fomba safiotra manana fampanantenana lehibe ho an'ny fikarohana maro olana.